၈၈ ရဲ့ နော်မန်: ရွှေည၀ါဆရာတော်အရေး ၈၈ ကျောင်းသားများ သဘောထားဖေါ်ထုတ်
“ ရှာပြီး ဖတ်မယ် ဆိုရင် ... ”
မောက္ခ ပညာရေး မဂ္ဂဇင်း
AungSan Of Burma
သူ့အတွေး သူ့အမြင် (2)
ကြေညာချက် / ပိုစတာ (1)
နှစ်သစ် ကို ကြိုဆိုခြင်း (2)
ရွှေည၀ါဆရာတော်အရေး ၈၈ ကျောင်းသားများ သဘောထားဖေါ်ထုတ်
ရန်ကုန် ကြည့်မြင်တိုင်မှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကို အရေးယူဖို့ မနက်ဖြန်မှာ နိုင်ငံတော် သံဃာ့ မဟာနာယက အဖွဲ့က ကြားနာမယ့် ကိစ္စကို ပြေပြေလည်လည် ဖြစ်စေချင်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအဖွဲ့က ဒီကနေ့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရွှေညဝါ ဆရာတော် ဦးပညာသီဟ ကို ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများက ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ဖူးမြော်နေကြစဉ်။ (Photo courtesy of YPI)
မနက်ဖြန် မွန်းလွဲပိုင်း ရန်ကုန် ဗဟန်းမြို့နယ် ကြားတောရလမ်း တိုင်း သံဃာ့ မဟာနာယက အဖွဲ့ရုံးမှာ ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကို စစ်ဆေးကြားနာ အရေးယူဖို့ ရှိပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအဖွဲ့ အနေနဲ့ ဒီကနေ့ ညနေမှာ ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကို သွားရောက် ဖူးမြော်ခဲ့ကြပါတယ်။
နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ဘယ်လိုပဲ ထွက်ပေါ် လာပါစေ ရွှေညဝါ ဆရာတော်နဲ့ အတူ တစ်သားတည်း ရပ်တည်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ကိုဂျင်မီက အာအက်ဖ်အေကို ပြောပါတယ်။
“ဆရာတော်ကြီးတွေက ခေါ်ယူဆိုဆုံးမမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ရုိုရိုကျိုးကျိုး နာခံပါ့မယ်၊ ဝန်ခံပါ့မယ် လို့လည်း ကျွန်တော်တို့ကို ပြောလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ နက်ဖြန် ထွက်လာမယ့် အဖြေဟာ အရေးယူတဲ့ ပုံစံမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဆိုဆုံးမခြင်း ဆိုရင်တော့ ပိုပြီး သင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ အရေးယူတယ် ဆိုတာထက် ဆိုဆုံးမမှုကို ပြုလုပ်စေချင်တဲ့ သဘော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေက ပြောချင်တယ်ဗျ။
ဆရာတော် ဘုရားကြီးကိုလည်း လျှောက်ထားပါတယ်။ ဆရာတော် ဘုရားကြီးက မေတ္တာရဲ့ အင်အားကို အစွမ်းကုန် ပြသသွားမယ်၊ အနိမ့်ဆုံးဘဝ ရောက်ပါစေ၊ တရားတော်နဲ့ အညီ စိတ်ရှည် သည်းညည်းခံပြီး သူ့ခန္တီစကို ပြသွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဘယ်အခြေအနေပဲ ရောက်ရောက် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာတော်ကြီးဟာ ဆရာ ဒကာဆိုတဲ့ သစ္စာတရားဟာ ဘယ်တော့မှ ပျက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်”
ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကို နိုင်ငံတော် သံဃာ့ မဟာနာယက အဖွဲ့က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အတွင်း တရားဟောခွင့် ပိတ်ပင်ထားချိန်မှာ ဆရာတော်ကို မန္တလေးတိုင်း NLD ရုံးက ဆွမ်းပင့်ဖိတ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကြွရောက်ပြီး တရားချီးမြှင့်ရာက ဆရာတော်ကို အခုလို အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကို ဒီကနေ့ သွားရောက် ဖူးမြော်ခဲ့သူ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက် နားဆင်ရန်
Posted by နော်မန် at 12:53 AM
“ မြန်မာ ဘလော့ဂ်များ.... ”
“ မြန်မာ ဘလော့ဂ်များ.... ” » မြန်မာသံဃာ့ ဦးသျှောင် » မြန်မာရဟန်းတော်များ » ကိုဇာဂနာ » ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ » ငွန်းငယ်မိုး (ကိုမိုးသွေးငယ်) » Co2zenith » ကိုမိုးသီးဇွန် » မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ » ကိုအောင်သာငယ် » ကိုမောင်လှ » ဘလော့ဂ်ဂါ ဟဲလ်ပါဒက်(စ်) » သက်ထူး » ဦးဂင်ကြီး » ဒီမိုဝေယံ » ခြားနားသူ » ဟင်းလင်းပြင် » ကိုဖိုးညို » ရွှေဝါရောင် » အနုပညာ သက်သေ » ကိုရန်အောင် » စေတန်ဂေါ့ » ဆုံဆည်းရာ » လှုပ်ရှားနေသောမိုးကောင်းကင် » ပျူနိုင်ငံ » ကိုဆောင်းယွန်းလ » သျှမ်းပြည်လူ့အခွင့်အရေး » ကိုကမာနီလာ » ဒီရေ » ၈၈ စစ်ကြောင်း » မြန်မာပြည်သား » သစ်ခက်သံလွင် » ကိုဟန်လင်းထွန်း » ကိုဘုန်းကျော် » ကိုမြင့်ဇေ » ကိုရဲဝံ့သူ » ကိုမောင်ရင် » မိုးသောက်ကြယ် » ဒေါင်းမာန်ဟုန် » ကိုဈာန် » NLD (မလေးရှား) » ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မ » ကိုနစ်နေမန်း » ဒဂုံ » ခွပ်ဒေါင်းသွေး » မြန်မာ ဘလော့ဂ်ဂါ » ယမုန်နာ » မာယာ » ရွက်မွန်စာမျက်နှာ » မျိုးချစ်မြန်မာ » ကိုထိုက် » ပလောင်လူငယ် » ကိုမင်းကျော် » နဗန ဘဝ » ရွှေဘိုသား » တောင်ပေါ်သား » အိုးဝေ » ကိုကောင်းကင်ကို » ကိုဂျာတောင်းနော် » မခင်မမမျိုး » မမြတ်လေးငုံ » မငယ်နိုင် » မမေငြိမ်း » မခင်မင်းဇော် » မသဒ္ဓါ » မအိမ်လွမ်းသူ » မြူးသျှရီ » မသက်ဇင် » မဆုမွန် » မကြေးမုံ » မြန်မာပြည်ကို လွမ်းသူ » အိမ်မက် » လင်းလက်ကြယ်စင် » မေမိုးမခ » SAW » ဂျစ်တူး » လုလု » ခေါင်ခေါင်
ရန်ကုန် မိုးလေ၀သ အခြေအနေ (Rangoon Weather Forecast)
“ ယောက် နေပါတယ်”
အမေ့ အိမ်က ရက်စွဲ...။
အမေ့ အိမ်မှာ ဒီအချိန်...။
နော်မန် ရဲ့ မှတ်တမ်းလွှာများ
ကချင်ပြည်နယ်၊ဟိုပင်မြို့တွင် တရားမဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတစ်ခ...
ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ရှင်သန်ရေးတို့အတွက် ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ရု...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
ရွှေညဝါဆရာ​တော် ​ကျောင်း​တိုက်က​နေ ဖယ်​ပေး​မည်
စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာရဲ့ (၉၃)နှစ်မြောက်ေ...
ရွှေည၀ါဆရာတော်အရေး ၈၈ ကျောင်းသားများ သဘောထားဖေါ်ထုတ်...
ရွှေညဝါဆရာတော်နဲ့ ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ေ...
အသနားခံစာ ပယ်ချခံရမှုအပေါ် ပေးဆပ်ဖို့ ၀န်မလေးတဲ့ ရွှေ...
ABSDF (ကျောင်းသားတပ်မတော်) နှင့် အစိုးရ အကျိုးဆောင...
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကျောင်းဆရာမကို မြန်မာအစိုးရတပ်မှ ပစ်...
သြစီ မှ ဘွဲ့ယူပြန်လာသော ညီတိုးငြိမ်း
စာရေးသူ နေမျိုးဇင် ခေါ် ကလောင် ညီတိုးငြိမ်း ထောင်ဆယ...
သိက္ခာမကျသေးတဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ့ သင်္ကန်းဝတ်တွေကို အတင်...
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ြ...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်န...
မြန်မာ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ လွတ်လပ် မျှတရေး ပြင်သစ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထံသို့ ပြင်သစ်န...
ဗိုလ်ခင်ညွန့် ကို ခွင့်လွှတ် မြန်ကြသူများ အတွက်
၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ...
ရသင့် ရထိုက်တဲ့ အကျဉ်းသားအခွင့်အရေး မရရှိဟု အင်းစိ...
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် အား လက်ပံတန်...
August,26 - 2008 . ဈေးမရောင်းပေမဲ့ အကြွေးတောင်းစရာ ရှိသူက ကျနော် ... ၈၈ ရဲ့ နော်မန်. Powered by Blogger Blogger Templates designed by Deluxe Templates Copyright 2009 .